Jaona 13: 1-38
Jaona 12 Jaona 13 Jaona 14
sady fantatr'i Jesosy koa fa ny Ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tànany, ary Andriamanitra no nihaviany, sady Andriamanitra koa no hiverenany.
Fa hoy Petera taminy: Sanatria raha hanasa ny tongotro Hianao. Jesosy namaly azy hoe: Raha tsy hosasako hianao, dia tsy manana anjara amiko.
Dia hoy Simona Petera taminy: Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary, fa ny tànako sy ny lohako koa.
Fa hoy Jesosy taminy: Izay efa nandro tsy mila hosasana, afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa; ary hianareo dia madio, nefa tsy hianareo rehetra.
Fa fantany ilay efa hamadika Azy; koa izany no nilazany hoe: Tsy madio avokoa hianareo rehetra.
Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, hianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra.
Raha fantatrareo izany, dia sambatra hianareo, raha manao izany.
Tsy milaza anareo rehetra Aho; fa fantatro izay nofidiko; fa mba hahatanteraka ny Soratra Masina hoe: Izay homana ny mofoko [miara-komana amiko]. no nanangana ny ombelahin-tongony hamely Ahy (Sal. 41. 9).
Ary tamin'izany, nony efa nivoaka izy, dia hoy Jesosy: Ankehitriny dia efa ankalazaina ny Zanak'olona; ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy.
Ary Andriamanitra kosa hankalaza Azy amin'ny tenany; eny hankalaza Azy miaraka amin'izay Izy.
Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady Ahy hianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe: 'Izay alehako tsy azonareo haleha,' dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny.
Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa.
Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia.
Hoy Simona Petera taminy: Tompoko, hankaiza moa Hianao? Jesosy namaly hoe: Izay alehako, dia tsy azonao anarahana Ahy ankehitriny fa hanaraka Ahy ihany hianao rahatrizay.
Hoy Petera taminy: Tompoko, nahoana no tsy mahazo manaraka Anao ankehitriny aho? Na dia ny aiko aza dia hafoiko noho ny aminao.